Home News Loolanka Dekadaha Soomaaliya Sababta ka Dambeeysa Maxeey tahay!!
Loolanka Dekadaha Soomaaliya Sababta ka Dambeeysa Maxeey tahay!!
Waxaa isa soo taraya tirada dalalka danaynaya in ay maamulaan dekada Soomaaliya , taas oo mararka qaar horseeday xasarad dublamaasiyadeed maadaamaa dalalka ka mid ah kuwa dekadaha raba aad isugu dhacsanyihiin.
Dalkii ugu dambeeyay ee soo bandhigay damaca ay uu ka qabo dekedaha waa Qatar, kaas oo wafti heer sare ah oo wasaaradda dekadaha ka socday usoo diray Soomaaliya, kuwaas oo kulamo la qaatay Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre.
Sida lagu faafiyay warbaahinta dowladda, socdaalka waftiga ayaa ahaa mid kormeer ah kadib heshiisyo ay horey u wada galeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowladda Qatar mar uu madaxweynaha tagay magaalada Dooxa.
Ra’isulwasaare Kheyre oo waftiga la hadlay ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in ay Soomaaliya u furantahay cid kasta oo doonaysa in ay maalgashi ku samayso dekadaha Soomaaliya.
Illaa iyo hadda waxaa heshiisyo dhaqangalay iyo kuwa aanan wali dhaqangalin lala galay illaa 3 dhinac oo isugu jira shirkado iyo dowladdo.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, Al Beyraak, ayaa muddo sanooyin ah maamulaysa dekada weyn ee Muqdisho, taas oo ah tan ugu weyn Soomaaliya.
Shirkad kale oo laga leeyahay dalka Imaaraatka oo magaceedu yahay DP World ayaa heshiisyo la saxiixatay maamulada Somaliland iyo Puntland , waxayna la wareegtay maamulka dekadaha Berbera iyo Boosaaso.
Inkasta oo ay heshiisyadaasi diidday dowladda Federaalka Soomaaliya, haddane madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed kula heshiiyay in Itoobiya ay maalgashato 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya.
Itoobiya ayaa horey saami 19% ah ku lahayd dekada Berbera, kaas oo ay ka iibsatay shirkadda DP World, lamana oga in labada hoggaamiye ay isla meel dhigeen arrinkaas iyo in kale.
Hase yeeshee dalalka qaar sida Itoobiya oo aan lahayn bad, waxa ay dekada Soomaaliya u qabtaa baahi rasmi ah, waxayna rabtaa in ay kala soo dagaan badeecooyinka tirad badan ee dibedda uga yimaadda ama waxyaabaha ay dhoofiso.
Waxaase dad badan walwal ku haya danaha is diinin ee dalalkan ay leeyihiin ama xiriirka xun eek a wada dhaxeeya, sida Qatar iyo Imaaraatka oo kale. Waxaa la’isweeydiinayaa illaa heerka arrimahan ay saamayn ku yeelan karaan danaha Soomaaliya.
Previous articleLabo Gabdhood oo walaalo ah oo ku Geeriyooday Rasaas Al shabaab ku fureen Gaari Shacab ah
Next articleShirqool lagu qaarajinaayo Saraakiil ka Tirsan NISA oo Bilaawday iyo ku Xigeenkii Saadaq Joon oo Qarax Gaarigiisa loogu xiray!!
[Xog] Yaa bixiyay lacagta la siiyay Xildhibaanadda Baarlamaanka, halkeese lagu bixiyay?
Al-Shabaab oo la Sheegay inay Go’doomiyeen Degaano ka tirsan Gobalka Gedo.